Zimbabwe Diaspora Loses a Giant Intellect
The shocking and unexpected news that Dr Alex Magaisa has died suddenly at 10:00am Sunday the 5th of June 2022 has shaken all Zimbabweans, especially those in the Diaspora.
The message below was put on Hopewill Chin'ono's Facebook page around noon BST Click to see Here
Zimbabwean public intellectual Dr Alex Magaisa has died.
Esteri Magaisa +263772211731
Max +263 772232746
"A great loss to the Zimbabwean community. A gifted and insightful philosopher and political pundit. His writings each Saturday were a weekly revelation. Zimbabwe will be worse off for this unexpected demise of a respected academic. He has left us far too soon. He will be sadly missed."
John Burke ZHRO 5th June 2022
"RIP my brother waMagaisa: I am in shock and deep pain but we mourn your death with Hope: we cherish what u taught us….. hero of democracy: Zimbabwe lost a real true champion; a good teacher and educator. Rest well waMagaisa and we promise that we will deliver Zimbabwe as u wanted always. Zimbabwe shall be free from ZanuPF grip. RIP waMagaisa."
Ben Tsikwa 5th June 2022
Dr Alex Magiasa was an acedemic and lecturer at the University of Kent and was the regular author of the "Long Read" a Saturday Piece of considered analysis regarding many of Zimbabwe's [selff inflicted by the ruling Zanu PF party] problems. From his considerable Wiki Entry: See all Here - Click
Alex Tawanda Magaisa (August 10, 1975 – June 5, 2022) was a United Kingdom based Zimbabwean academic and lecturer of law at the Kent Law School of the University of Kent. He served as the Advisor (Chief of Staff) of the then Prime Minister of Zimbabwe Morgan Tsvangirai from 2012-2013. Prior to becoming Advisor to the Prime Minister, Magaisa had been working as a core member of a team of experts tasked to advise on the drafting of the new Constitution of Zimbabwe. He is known for his legal, political and social commentary work on issues affecting Zimbabwe and other developing nations through his blog The Big Saturday Read. His work was sometimes featured by Zimbabwean news outlets including The Standard, Daily News, Newzimbabwe.com, and The Herald.
Next article: Stop these Deportations	Next